JøHOOYøNKA Waqooyi Galbeed Bari koonfur - PDF
Download "JøHOOYøNKA Waqooyi Galbeed Bari koonfur"
2 11 J HOOY NKA Waxa jira afar jiho oo waaweyn, oo kala ah : bari, galbeed, woqooyi iyo koonfur.waxa kale oo jira afar jiho oo yaryar oo kala ah :woqooyi-bari, koonfurbari, woqooyi-galbeed iyo koonfurgalbeed. Jihooyinka waxa aynu u adeegsanaa si aynu u helo meeli halka ay ku taal.waxa kale ay ina tusaan wadooyinka.waxaa isticmaala:diyaaradaha,maraakiibta,daraw alada,ugaadhsadaya Waqooyi koonfur sha,safarada iyo kuwa barafka ciyaara si ay u ogaadaan barta ay u socdaan. Marka aynu barano jihooyinka waxa aynu fahmi kara qoraal iyo af ahaanba warbixinta halka jihooyinku tilmaamayaan. Marka aynu dhageysaneyno wararka iyo saadaasha hawada ayey inoo hawl yar tahay in aynu fahano nuxurka waxa la inoo sheegayo, haddii aynu garanayno jihooyinka.qalabka loo isticmaalo raadinta jiho waxa la yidhaahdaa Jiheeye. Bari Waqooyi Waqooyi Waqooyi Bari Bari Koonfur Konfur Bari Koonfur
4 13 QAYBAHA NOORWAY Dalka Noorway waxa uu ka kooban shan qaybood, qayb kastana magaceedu waxa uu tilmaamayaa qaybta ay dalka kaga taalo. Waxaana ay kala yihiin: 1.Waaxda bari 2.Waaxda galbeed 3.Waaxda koonfureed 4:Waaxda woqooyi 5.Waaxda Badhtamaha Qaybaha ay ku kala yaaliin shanta qaybood waa sidan: Qaybaha dalka noorwey Waaxda bari Waaxda galbeed Waaxda koonfureed Waaxda badhtamaha Waaxda woqooyi Gobolada Noorwey Oslo,akershus,Østfold, Vestfold,Hedmark, Oppland,Buskerud,Telemark Rogaland,Hordaland,Sogn,og Fjordane,Møre og Romsdal Aust-augder,Vest-augder Sør-Trøndlag,Nord-Trøndlag Nordland,Troms,Finnmark
6 15 WARB X NO MUH M AH OO KU SAABSAN NOORWAY Noorway waxay ka mid tahay wadamada woqooyiga yurub,oo kala ah: Noorway, Danmark, Iswiidhan,Finland iyo Islaand. Wadamada Noorway, Iswidhan iyo Danmark waxa la isku yidhaahdaa wadamada iskaandeneefiga.noorway waxay deris la tahay wadamo dhowr ah. Dhinaca woqooyiga waxa ka xigga Ruushka iyo Finland, barigana Iswidhan oo ah tan xudduuda ugu dheer la leh. Danmark iyo Islaandna waxay la leedahay xudduudbaddeed. Dunidda oo kubbad ah waxa loo qaybiyaa laba. Xariiqda kala badha dhulka waxa la yidhaahdaa dhulbadhe.qabta woqooyiga ka xiggta dhul-badhaha waxa la yidhaahdaa kulaalaha woqooyi. Tan koonfur ka xigtana waxa la yidhaahda kulaalaha koonfureed. Barta woqooyi ugu xigta adduunka waxa la yidhaahda cidhifka woqooyi. Kan koonfureedna waxa la yidhaahdaa cidhifka-koonfureed. Cidhifka woqooyi ee dunida waxa ay Noorway ku leedahay jasiirado dhowr ah lana yidhaahdo Svalbard. Jan Mayen waa jasiiirad 600 km woqooyi ka xigta Islaand. Inta u dhaxaysa Noorway iyo Svalbard waxa ku taal jasiirad lagu magacaabo Bjørnøya. Jasiiradahaana waxa iska leh Noorway.